हा’न्ने राँगो जस्तो भएर भित्ता हा’न्दै हिड्ने प्रचण्डका दिन गए… – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ताहा’न्ने राँगो जस्तो भएर भित्ता हा’न्दै हिड्ने प्रचण्डका दिन गए…
हा’न्ने राँगो जस्तो भएर भित्ता हा’न्दै हिड्ने प्रचण्डका दिन गए…
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले ‘हा’न्ने राँगो जस्तो भएर भित्ता हा’न्दै हिड्ने’ प्रचण्डका दिन अव सकिएको वताएका छन्। ‘अहिले प्रचण्डको राजनीतिक पो’जिशन कस्तो देख्नु हुन्छ’ भन्ने जिज्ञासामा केसी भन्छन्–‘केहि मानिस दाहिने देव्रे भएपनि आम मानिसहरु चाहि उनको पार्टीमा ला’मवद्ध नै देखिन्छ।
अरुले भने जस्तो प्रचण्डको धर्ती खस्किन्छ जस्तो चै मलाई लाग्दैन। तर, जुन किसिमको हा’न्ने राँगो जस्तो भएर हिड्थे त्यसरी चाहि अव भित्ता हान्दै हिड्नलाई उनलाई गाह्रो भईरहेको छ।’ यहि असहजताका कारण प्रचण्डले अहिले वाईसिएलको कुरा गर्न थालेको उनको दा’वी छ ।
‘मलाई के लाग्छ भने वाईसिएलवाट भएन भने ल’डाकुहरु पनि पुनर्जिवित हुन्छन्, प्रचण्ड त्यो ह’दसम्म जान्छन् अव’ उनी भन्छन्–‘त्यो त कसैको लागि पनि सहज कुरा भएन। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म पनि त्यो होईन। अव यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने त ? आजको प्रश्न यहि हो।’
प्रचण्ड शा’न्ति प्रकृयामा आउनुको औ’चित्य पुरा नभएको र ब्यक्तिगत स्वार्थवाट लक्षित भएको वताएका उनले थपे–‘जनसेना विघटन गरिदिए, जनसेनाको नाममा आएको आर्जन पनि विचलन गरेको भन्ने छ। यस्तो मान्छे फेरी जनसेना, फेरी वाईसिल भन्नु त नैतिक दृष्टिकोणले नमिल्ने हो।’
प्रचण्डले जनसेना ब्युँताउँन सक्ने दा’वी गरेका केसीले भन्छन्–‘सम्भावना प्रवल छ। उनले भनेकै छन–म त वि’द्रोही क’माण्डर हुँ। अनि वाईसिएल पु’नर्गठन हुँदैछ अरे भनेको पनि सुन्दैछु म आजभोली। वाईसिएल पु’नर्गठन भनेको त फेरी मान्छेको टाउकामा डण्डा हान्ने नै कुरा हो।
वाईसिएलको चरित्र त त्यहि हो, त्यहि गर्छ त्यसले।’ देश फेरी द्’वन्द्वमा जाने भन्दा अर्को विकल्प आफुले नदेखेको उनले वताए । प्रचण्डसँग अहिले पनि ज’नयु’द्ध हाँक्ने सामथ्र्य रहेको वताएका उनले यसअघि दिल्लीमा वसेर पनि उनले नेपालमा द्’वन्द्व च’र्काएको वताए ।
‘संगठन पद्धतीमा चल्ने हो । नेता कहाँ छ भन्ने थाहा नपाई त आन्दोलन चल्छ भने अहिले नचल्ने भन्ने हुँदैन। हिजो प्रचण्डले ज’नयुद्ध लडेको हो र ? उनी दिल्लीमा सुतेर वसेका हुन्। कत्रो ज’नयुद्ध हुन्थ्यो त यहाँ’ केसीले भने–‘त्यो मेसिनले चलाउने हो, सं’यन्त्रले चलाउने हो।
नीति दिए पुगिहाल्छ। कार्यकर्ता ल’ड्ने हुन, मर्ने उनै हुन । हिजोको यु’द्धमा पनि एउटा नेता मर्यो र ? एउटा नेताका छोराछोरी मरेका छन् ? उनीहरु त पिएचडी गर्दैथिए–त्यतिवेला। वोर्डिङ्ग स्कुलमा पढ्थे नेताका छोराछोरी। अर्थोपार्जनमा लागेका हुन्थे ।’‘एमालेको माधव नेपाल पक्षले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई कसरी हेर्नु हुन्छ?’
भन्ने प्रश्नमा भने केसीले त्यो त कुटाई खाने काम हो भने। ‘कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यसो गर्न पाईदैन । कम्युनिष्ट पार्टीमा कहाँ समानन्तर पार्टी गठन गर्न पाईन्छ, कुटाई खाँइदैन ? हाम्रा पालामा अखिलको समानान्तर भेला हुन खोजेको थियो, झण्डै गोदाई खाएका थिए ।
०३६ सालतिर काग्रेसका वखान सिंह वालाहरुले डिल्ली वजारको सांस्कृतिक केन्द्रमा कु’टाई नै खाए’ उनले भने –‘तर, ज’वरज’स्ति गरेपछि कस्को के लाग्छ र ?’पार्टी प’द्धतीमा अल्पमत वहुमतको सिस्टम हुने र अल्पमत वहुमतको सिस्टम पार्टीको प्रकृयावाट अगाडि वढ्ने वताएका उनले ज’वरज’स्ति गरेर केहि कुराको अर्थ नहुने वताए ।
‘यिनीहरुको कुरा चाहिँ के छ भने, नेकपा एउटै हुँदा यो काम केपी ओलीले वि’गारेको भन्ने छ। कुनै वैठकमा नआईदिने, मान्दिन तिमिहरुको कुरा भन्दिने। यस्तो गरेकाले हामी यो ठाउँमा आईपुगेका भन्ने यिनीहरुको तर्क छ’ उनले भने–‘मेरो भनाई चाहि त्यो भएपनि नेतृत्व त झेल्नु पर्छ, अव गर्ने के त ? उ जनतावाट निर्वाचित भएर आएको हुन्छ, संसदिय दलको नेतृत्व जि’तिराखेको हुन्छ।
पार्टी महाधिवेसनवाट अध्यक्ष भएर ५ वर्षको लागि चु’निएर त्यहाँ पुगिराखेको हुन्छ। अव तपाई यसलाई पद्धती भन्दा पर गएर समानान्तर क’मिटि गठन गरेर, वक्तब्य नि’कालेर हुन्छ ?’महाधिवेसनवाट निर्वाचित पदाधिकारीको प’द खा’रेज गरेर ओलीले चाही गल्ति गरेको केसी वताउँछन् ।
‘अदालतले एमाले–माओवादी वनाएपछि पहिलो वैठक आयोजना गरेर समिक्षा गर्दै सहमतिमा अगाडि वढ्नु पथ्र्यो । त्यो भएन । पदाधिकारी ह’टाई दिएको छ अनि अर्कोतर्फ २२ जना थपेपको छ’ उनले भने–‘तर, माधव नेपाल पक्षले पनि कम गाईजात्रा त गरेको छैन ।
टाँ’सिएको छ पेरिसडाँडामा गएर , जो’डिएको छ घाँ’टी प्रचण्डसँग, पार्टी क्या’प्चर गरेर फेरी एकता गर्ने भन्दिराखेको छ । यो त नेतृत्वले सहँदैन , माधव नेपालले पनि सहँदैन यो कुरा। कसैले पनि सहँदैन। यो हो केन्द्रिय डि’भेटको कुरा, केन्द्र चै यहाँ हो।’ भिडियो